प्रेम मा: भावना र बुद्धि बीच (स्तम्भ 22) - रब्बी माइकल अब्राहम
प्रेममा: भावना र दिमाग बीच (स्तम्भ 22)
16 टिप्पणी	/ १६ एलुल ५७६६ - १९/०९/२०१६ 26 / 06 / 2019
यस हप्ताको टोरा भागमा (र म बिन्ती गर्दछु) पर्शा "र प्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस्" शेमाको पाठबाट देखा पर्दछ, जसले प्रभुलाई प्रेम गर्ने आज्ञासँग सम्बन्धित छ। जब मैले आज कल सुनें, मैले विगतमा सामान्य रूपमा प्रेम र विशेष गरी ईश्वरको प्रेमको बारेमा सोचेका केही विचारहरू सम्झें, र मैले तिनीहरूको बारेमा केही बुँदाहरू तीखो बनाएको थिएँ।
निर्णयहरूमा भावना र दिमाग बीच
जब मैले येरुहमको येशिवामा पढाएको थिएँ, त्यहाँ विद्यार्थीहरू थिए जसले मलाई जीवनसाथी छान्ने, भावना (हृदय) वा दिमागलाई पछ्याउने बारे सोधे। मैले उनीहरूलाई जवाफ दिएँ कि दिमाग पछि मात्र, तर दिमागले मनले के महसुस गर्छ (भावनात्मक सम्बन्ध, केमिस्ट्री, पार्टनरसँग) लाई आफ्नो निर्णयमा कारकको रूपमा लिनुपर्छ। सबै क्षेत्रहरूमा निर्णयहरू दिमागमा लिनु आवश्यक छ, र हृदयको काम इनपुटहरू राख्नु हो जुन खातामा लिनु आवश्यक छ तर निर्णय नगर्नुहोस्। यसका दुई सम्भावित कारणहरू छन्: एउटा प्राविधिक। मुटु पछि हिड्दा गलत नतिजा आउन सक्छ। भावना सधैं एकमात्र वा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक होइन। मन भन्दा मन सन्तुलित हुन्छ । दोस्रो महत्वपूर्ण छ। जब तपाइँ लगाम सुम्पिनुहुन्छ, तपाइँ वास्तवमा निर्णय गर्नुहुन्न। परिभाषा अनुसार निर्णय भनेको मानसिक कार्य हो (वा बरु: स्वैच्छिक), भावनात्मक होइन। एक निर्णय सचेत निर्णय द्वारा गरिन्छ, जबकि भावना मेरो आफ्नै निर्णय बाहिर होइन आफ्नो लागि उत्पन्न हुन्छ। वास्तवमा, हृदय पछि हिंड्नु कुनै निर्णय होइन। यो एक अनिर्णय हो तर परिस्थितिले तपाईलाई जहाँ भए पनि पछि तान्नु होस्।
अहिलेसम्मको धारणा यो छ कि प्रेम हृदयको कुरा हो, जीवनसाथी छनौट गर्नु केवल प्रेमको कुरा होइन। उल्लेख गरिए अनुसार, भावना केवल एक कारक हो। तर मलाई लाग्छ कि यो सम्पूर्ण तस्वीर होइन। यहाँसम्म कि प्रेम आफैमा एक भावना मात्र होइन, र सायद यो यसमा मुख्य कुरा पनि होइन।
प्रेम र अभिलाषामा
जब याकूबले राहेलको लागि सात वर्ष काम गरिरहे, धर्मशास्त्रले भन्छ, "र उसको आँखामा उसको प्रेममा केही दिन हुनेछ" (उत्पत्ति २६:२०)। प्रश्न थाहा छ कि यो विवरण हाम्रो सामान्य अनुभव को विपरीत देखिन्छ। सामान्यतया जब एक व्यक्तिले कसैलाई वा केहि माया गर्छ र उसको लागि पर्खनु पर्छ, हरेक दिन उसलाई अनन्तता जस्तै लाग्छ। जबकि यहाँ श्लोकले उनको सात वर्षको सेवा उनलाई केही दिनको जस्तो लाग्यो भनिएको छ। यो हाम्रो अन्तर्ज्ञान को एकदम विपरीत छ। यो सामान्यतया व्याख्या गरिएको छ कि यो किनभने याकूबले राहेललाई माया गर्थे र आफैलाई होइन। एक व्यक्ति जसले केहि वा कसैलाई माया गर्छ र आफ्नो लागि चाहिन्छ वास्तवमा आफूलाई केन्द्रमा राख्छ। यो उसको रुचि हो जसलाई पूर्ति चाहिन्छ, त्यसैले उसलाई जित्न नसकेसम्म पर्खन गाह्रो छ। उसले आफूलाई माया गर्छ र आफ्नो पार्टनरलाई होइन। तर यदि एक पुरुषले आफ्नो पार्टनरलाई माया गर्छ र उसको काम उसको लागि होईन, उसको लागि होइन, तब वर्षौंको काम पनि उसलाई सानो मूल्य लाग्छ।
डोन येहुदा अबारबानेलले आफ्नो पुस्तक कन्भर्सेसन्स अन लभमा, साथै स्पेनिस दार्शनिक, राजनीतिज्ञ र पत्रकार जोस ओर्टेगा इ गास्टले आफ्नो पुस्तक फाइभ एसेज अन लभमा प्रेम र वासना बीचको भिन्नता देखाउँछन्। दुबैले व्याख्या गर्छन् कि प्रेम एक केन्द्रापसारक भावना हो, जसको अर्थ यसको शक्तिको तीर व्यक्तिलाई बाहिरी रूपमा अनुहार गर्दछ। जहाँ वासना एक केन्द्रापसारक भावना हो, अर्थात् शक्तिको बाण बाहिरबाट भित्रतिर फर्कन्छ। प्रेममा जो केन्द्रमा छ त्यो प्रिय हो, जबकि वासनामा जो केन्द्रमा छ त्यो प्रेमी (वा वासना वा कामना) हो। ऊ आफ्नो लागि प्रेमीलाई जित्न वा जित्न चाहन्छ। यसबारे हाम्रा स्काउटहरूले पहिल्यै भनेका छन् (त्यहाँ, त्यहाँ): एक मछुवाले माछालाई माया गर्छ? हो। त्यसोभए उसले किन खाइरहेको छ?!
यस शब्दावलीमा यो भन्न सकिन्छ कि याकूबले राहेललाई माया गर्थे र राहेललाई लालसा गरेनन्। वासना अधिकार हो, यसको मतलब यो हो कि वासनाले उसको लागि अरु केहि राख्न चाहन्छ जुन उसले चाहान्छ, त्यसैले उसले यो पहिले नै हुने प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। हरेक दिन उनलाई अनन्तता जस्तो लाग्छ। तर प्रेमी अर्को (प्रेयसी) लाई दिन चाहन्छ, त्यसैले यो हुनको लागि आवश्यक छ भने वर्षौंसम्म काम गर्न उसलाई परेशान गर्दैन।
सायद यो भिन्नतामा अर्को आयाम थप्न सकिन्छ। प्रेमको जागरणको लागि पौराणिक रूपक प्रेमीको हृदयमा अड्किएको कामदेवको क्रस हो। यो रूपकले प्रेमलाई कुनै बाह्य कारकको कारणले प्रेमीको हृदयमा उत्पन्न हुने भावनाको रूपमा बुझाउँछ। यो उनको निर्णय वा निर्णय होइन। तर यो वर्णन प्रेम भन्दा पनि वासनाको लागि उपयुक्त छ। प्रेममा केहि बढी ठोस र कम सहज हुन्छ। यदि यो कानून र नियमहरू बिना र विवेक बिना आफैबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ, यो एक अव्यक्त विवेक, वा यसको जागरण को क्षण अघि मानसिक र आध्यात्मिक काम को परिणाम हुन सक्छ। मैले बनाएको मनलाई मैले आकार दिएको कारणले जागृत भएको छ। यसरी प्रेममा, वासनाको विपरीत, विवेक र इच्छाको आयाम छ र भावना मात्र होइन जुन सहज रूपमा मबाट स्वतन्त्र रूपमा उत्पन्न हुन्छ।
भगवानको प्रेम: भावना र बुद्धि
माइमोनाइड्सले आफ्नो पुस्तकमा दुई ठाउँमा परमेश्वरको प्रेमको बारेमा कुरा गरेका छन्। टोराहको आधारभूत नियमहरूमा उहाँले परमेश्वरको प्रेम र तिनीहरूका सबै व्युत्पन्नहरूका नियमहरूबारे छलफल गर्नुहुन्छ, र पश्चात्तापको नियमहरूमा पनि उहाँले तिनीहरूलाई संक्षिप्त रूपमा दोहोर्‍याउनुहुन्छ (अन्य विषयहरूमा जस्तै पश्चात्तापको नियमहरूमा फेरि एक पटक दोहोरिने)। Teshuvah को दसौं अध्याय को सुरु मा, उहाँले उनको नाम को लागी प्रभु को काम संग व्यवहार गर्दछ, र अन्य कुराहरु मा उनी लेख्छन्:
ए। म टोराहका आज्ञाहरू पालन गर्छु र त्यसमा लेखिएका सबै आशीर्वादहरू प्राप्त गर्न सकूँ वा म अर्को संसारको जीवन पाउन सकूँ र टोराले चेतावनी दिएका अपराधहरूबाट पछि हट्न सकूँ भनी कसैले नभनोस्। ताकि म बचाउन सकूँ, जसले यसरी काम गर्छ त्यो डरको कामदार हो न कि भविष्यवक्ताहरूको सद्गुण र ऋषिहरूको सद्गुण होइन, र भगवानले यस बाटोमा काम गर्दैनन् तर देशका मानिसहरू र नारीहरू। र साना केटाकेटीहरू जसले उनीहरूलाई डराएर काम गर्न सिकाउँछन् जबसम्म तिनीहरू बढ्दै जान्छन् र प्रेमबाट बाहिर काम गर्दैनन्।
बि. प्रेमको कार्यकर्ता टोराह र मात्जाहसँग व्यवहार गर्दछ र बुद्धिको बाटोमा हिंड्छ संसारको कुनै चीजको लागि होइन र नराम्रोको डरले होइन र असलको उत्तराधिकारी होइन तर सत्य गर्दछ किनभने यो सत्य हो र आउने असलको अन्त्य हो। यसको, र यो सद्गुण एक धेरै महान गुण हो जुन उहाँलाई प्रेम गरिएको थियो जस अनुसार उहाँले काम गर्नुभयो तर प्रेमले होइन र यो त्यो गुण हो जसमा धन्यलाई मोशाद्वारा बोलाइएको थियो कि यो भनिएको थियो र तपाईंले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभयो। र जब एक मानिसले प्रभुलाई प्रेम गर्दछ उचित प्रेमले तुरुन्तै सबै मतजाहहरू प्रेमबाट बाहिर बनाउँछ।
माइमोनाइड्सले आफ्ना शब्दहरूमा यहाँ ईश्वरको काम र यसको नाम (अर्थात् कुनै बाह्य स्वार्थको लागि होइन) उहाँप्रतिको प्रेमको बीचमा पहिचान गर्दछ। यसबाहेक, Halacha XNUMX मा उहाँले परमेश्वरको प्रेमलाई सत्य गर्नको रूपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ किनभने यो सत्य हो र कुनै अन्य कारणले होइन। यो एक धेरै दार्शनिक र चिसो परिभाषा हो, र पनि अलगाव। यहाँ कुनै भावनात्मक आयाम छैन। परमेश्वरको प्रेम सत्य गर्न हो किनभने उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, र त्यो हो। यही कारणले माइमोनाइड्स लेख्छन् कि यो प्रेम बुद्धिमानी (र भावनात्मक होइन) को सद्गुण हो। यसलाई कहिलेकाहीँ "परमेश्वरको बौद्धिक प्रेम" भनिन्छ।
र यहाँ, तुरुन्तै निम्न हलखाहमा उहाँले पूर्ण विपरीत लेख्नुहुन्छ:
तेस्रो। र कसरी उचित प्रेम हो कि उसले Gd लाई धेरै गहिरो र धेरै गहिरो प्रेम गर्नेछ जब सम्म उसको आत्मा Gd को प्रेम मा बाँधिएको छैन र सधैं यसमा गल्ती गर्दछ जस्तै प्रेम को रोगी जसको मन को प्रेम को लागी मुक्त छैन। त्यो महिला र उसले शनिबार त्यसमा सधैं गल्ती गर्छ, यसबाट उहाँका प्रेमीहरूको हृदयमा परमेश्वरको प्रेम हुनेछ जसले सधैं आफ्नो सारा हृदय र आफ्नो सारा आत्माले आज्ञा गरे अनुसार गल्ती गर्दछ, र यो सोलोमनले भनेको हो। दृष्टान्त म प्रेमको बिरामी छु, र दृष्टान्तका प्रत्येक गीत यसै उद्देश्यको लागि हो।
यहाँ प्रेम पुरुषको नारीप्रतिको प्रेम जत्तिकै तातो र भावनात्मक छ। जस्तै उत्तम उपन्यासहरूमा वर्णन गरिएको छ, र विशेष गरी गीतहरूको गीतमा। प्रेमी प्रेममा विरामी हुन्छ र सधैं यसमा गल्ती गर्छ। उसलाई कुनै पल विचलित गर्न सकेन।
यो सबैले अघिल्लो हलाखामा वर्णन गरिएको चिसो बौद्धिक चित्रसँग कसरी सम्बन्धित छ? के माइमोनाइड्स अलमलमा थिए, वा उनले त्यहाँ लेखेका कुरा बिर्सनुभयो? म नोट गर्नेछु कि यो एक विरोधाभास होइन जुन हामीले उहाँको लेखनमा दुई फरक ठाउँहरू, वा माइमोनाइड्स र ताल्मुडमा भनिएको बीचमा फेला पारेका छौं। यहाँ दुईवटा नजिक र लगातार कानूनहरू छन् जुन एकअर्काबाट पूर्ण रूपमा फरक भाषाहरू बोल्छन्।
मलाई लाग्छ कि पूरक डिकोडिङमा लाभ असफलताबाट यहाँ सावधान हुनुपर्छ। जब तपाईंले कुनै कुरालाई चित्रण गर्नको लागि दृष्टान्त ल्याउनुहुन्छ, दृष्टान्तले धेरै विवरणहरू समावेश गर्दछ र ती सबै सन्देश र दृष्टान्तसँग सान्दर्भिक हुँदैनन्। दृष्टान्त सिकाउन आएको हो भन्ने मुख्य बिन्दु पत्ता लगाउनु पर्छ, र यसमा बाँकी विवरणहरूलाई धेरै संकीर्ण रूपमा लिनु हुँदैन। मलाई लाग्छ कि हलाचा ३ को दृष्टान्तले भन्छ कि भगवानको प्रेम बौद्धिक र भावनात्मक नभए पनि यो सधैं गल्ती हुनुपर्छ र हृदयबाट विचलित हुनु हुँदैन। दृष्टान्त प्रेमको स्थायित्व सिकाउनको लागि आउँदछ जसरी महिलाको लागि पुरुषको प्रेममा हुन्छ, तर रोमान्टिक प्रेमको भावनात्मक प्रकृति आवश्यक छैन।
पश्चात्ताप, प्रायश्चित र क्षमा को उदाहरण
म फेरि एक क्षणको लागि येरुहमको सुखद अवधिमा फर्कनेछु। त्यहाँ हुँदा, मलाई Sde Boker मा वातावरणीय हाई स्कूलले सम्पर्क गर्यो र प्रायश्चित, क्षमा र क्षमामा पश्चात्तापको दस दिनको अवधिमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्न भनियो, तर धार्मिक सन्दर्भमा होइन। मैले उनीहरूलाई सम्बोधन गरेको प्रश्नबाट मेरो टिप्पणी सुरु गरें। मानौं रुबेनले सिमोनलाई हिर्काए र उसको अन्तस्करणको पीडा छ, त्यसैले उसले गएर उसलाई शान्त गर्ने निर्णय गर्छ। उसले आफ्नो हृदयको तलबाट माफी माग्छ र उसलाई माफी दिन आग्रह गर्दछ। अर्कोतर्फ, लेभीले शिमोनलाई पनि हिर्काए (शिमोन सायद कक्षाको हेड केटा थियो), र उसलाई त्यसको लागि कुनै पछुतो छैन। उसको हृदयले उसलाई सताउँदैन, उसको यस विषयमा कुनै भावना छैन। उसलाई साँच्चै यसको वास्ता छैन। तैपनि, उसले बुझ्छ कि उसले नराम्रो काम गरेको छ र शिमोनलाई चोट पुर्याउँछ, त्यसैले ऊ पनि गएर माफी माग्ने निर्णय गर्छ। स्वर्गदूत गेब्रियल दुर्भाग्यपूर्ण सिमोनकहाँ आउँछन् र उहाँलाई रुबेन र लेवीको हृदयको गहिराइ प्रकट गर्दछ, वा सायद सिमोन आफैंले रुबेन र लेवीको हृदयमा के भइरहेको छ भनेर कदर गर्दछ। उसले के गर्नुपर्छ? के तपाईं रुबेनको माफी स्वीकार गर्नुहुन्छ? र लेवीको अनुरोधको बारेमा के हो? कुन माग बढी क्षमा योग्य छ?
अचम्मको कुरा, दर्शकहरूबाट प्रतिक्रियाहरू धेरै सुसंगत थिए। Reuven को अनुरोध प्रामाणिक र क्षमा को योग्य छ, यद्यपि लेवी कपटी छ र उसलाई माफ गर्न को लागी कुनै कारण छैन। अर्कोतर्फ, मेरो विचारमा स्थिति एकदम उल्टो भएको तर्क गरें। रुबेनको माफी उनको अन्तस्करणको पीडालाई खुवाउनको लागि हो। उसले वास्तवमा आफ्नै लागि (केन्द्रीगत रूपमा) काम गर्दछ, आफ्नै रुचिबाट (आफ्नो पेट दुखाइ र अन्तस्करणको पीडालाई शान्त पार्न)। लेवी, अर्कोतर्फ, एक उल्लेखनीय शुद्ध कार्य गर्दछ। यद्यपि उसलाई पेट वा मुटुको दुखाइ छैन, उसले महसुस गर्छ कि उसले केहि गल्ती गरेको छ र घाइते साइमनलाई शान्त पार्नु उसको कर्तव्य हो, त्यसैले उसले उहाँलाई के आवश्यक छ र उहाँलाई माफी माग्छ। यो एक केन्द्रापसारक कार्य हो, किनकि यो पीडितको लागि गरिन्छ र आफ्नो लागि होइन।
उनको मनमा लेवीले केही महसुस नगरे पनि, किन महत्त्वपूर्ण छ? यो रुबेन भन्दा फरक रूपमा बनाइएको हो। उसको एमिग्डाला (जुन सहानुभूतिको लागि जिम्मेवार छ) क्षतिग्रस्त छ र त्यसैले उनको भावना केन्द्र सामान्य रूपमा काम गरिरहेको छैन। कै त?! र मानिसको जन्मजात संरचनाले उहाँप्रतिको हाम्रो नैतिक सम्मानमा भाग लिनुपर्छ? यसको विपरित, यो ठ्याक्कै यो चोट हो जसले उसलाई शुद्ध, परोपकारी र थप पूर्ण तरिकामा कार्य गर्न अनुमति दिन्छ, केवल शिमोनको खातिर, र त्यसैले उहाँ क्षमाको योग्य हुनुहुन्छ।
अर्को कोणबाट यो भन्न सकिन्छ कि रूबेनले वास्तवमा भावनाबाट काम गरिरहेको छ, जबकि लेवीले आफ्नै निर्णय र निर्णयबाट कार्य गरिरहेको छ। नैतिक मूल्याङ्कन व्यक्तिलाई उसको निर्णयको लागि आउँछ न कि उसमा उत्पन्न हुने वा नउठ्ने भावना र प्रवृत्तिको लागि।
भावना कारण वा परिणामको रूपमा
मैले भन्न खोजेको होइन कि अपराध वा पश्चातापले कार्य वा व्यक्तिको नैतिकतालाई अनिवार्य रूपमा अस्वीकार गर्दछ। यदि लेवीले शिमोनलाई सही (केन्द्रापसारक) कारणहरूका लागि अप्ठ्यारो पार्छ, तर एकै समयमा उसलाई आफूलाई लागेको चोट पछी दोषी महसुस हुन्छ, कार्य पूर्ण र पूर्ण रूपमा शुद्ध छ। जबसम्म उसले गर्ने कारण यो भावना होइन, त्यो हो, उसको भित्रको आगोलाई छोप्नु, तर पीडित साइमनलाई निको पार्नु। भावनाको अस्तित्व, यदि यो मेलमिलापको कार्यको कारण होइन भने, नैतिक मूल्याङ्कन र क्षमाको लागि अनुरोधको स्वीकृतिमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। एक सामान्य व्यक्तिमा यस्तो भावना हुन्छ (एमिग्डाला यसको लागि जिम्मेवार छ), चाहे उसले चाहे वा नहोस्। त्यसैले यो स्पष्ट छ कि यसले आवेदनको प्राप्तिलाई रोक्दैन। तर ठ्याक्कै यस कारणले गर्दा यो भावना पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण छैन, किनकि यो मेरो निर्णयको पछि नभई आफैबाट उत्पन्न हुन्छ (यो एक प्रकारको वृत्ति हो)। वृत्तिले नैतिक अखण्डता वा हानिलाई संकेत गर्दैन। हाम्रो नैतिकता हामीले गर्ने निर्णयहरूद्वारा निर्धारण गरिन्छ न कि भावनाहरू वा प्रवृत्तिहरू जुन हामीमा नियन्त्रण बाहिर उत्पन्न हुन्छ। भावनात्मक आयामले हस्तक्षेप गर्दैन तर उही कारणको लागि यो नैतिक प्रशंसाको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छैन। भावनाको अस्तित्व नैतिक न्यायको विमानमा तटस्थ हुनुपर्छ।
यदि भावना कार्यमा नैतिक समस्याको सचेत बुझाइको परिणामको रूपमा सिर्जना गरिएको छ भने, यो रूबेनको नैतिकताको संकेत हो। तर फेरि, लेवी जो amygdala संग पीडित छ र यसैले यस्तो भावना को विकास गरेन, सही नैतिक निर्णय गरे, र त्यसैले उनी रूबेनबाट कम नैतिक प्रशंसा र प्रशंसाको योग्य छैनन्। उहाँ र रूबेन बीचको भिन्नता केवल तिनीहरूको दिमागको संरचनामा छ र तिनीहरूको नैतिक निर्णय र निर्णयमा होइन। भनिएको छ, दिमागको संरचना एक तटस्थ तथ्य हो र एक व्यक्तिको नैतिक प्रशंसा संग कुनै सम्बन्ध छैन।
त्यसैगरी ताल आगलीका मालिकले आफ्नो परिचयमा ग अक्षरमा लेख्छन्:
र मैले यसमा भनेका कुराहरूबाट, याद गर्नुहोस् कि मैले हाम्रो पवित्र टोराहको अध्ययनको सन्दर्भमा केही मानिसहरूले दिमागको बाटोबाट भनेका कुरा सुनेको थिएँ, र भनेका थिए कि जो विद्यार्थीले आविष्कारहरू नवीकरण गर्दछ र खुसी हुन्छ र आफ्नो अध्ययनको आनन्द लिन्छ, उसले टोराहको अध्ययन गर्दैन। , तर जसले आफ्नो सिकाइलाई सिकाउँछ र स्वाद लिन्छ, उसले आफ्नो सिकाइ र आनन्दमा हस्तक्षेप गर्दछ।
र साँच्चै यो एक प्रसिद्ध गल्ती हो। यसको विपरित, किनकि टोराहको अध्ययन गर्ने आज्ञाको सार यही हो, छ र खुसी हुन र आफ्नो अध्ययनमा रमाईलो गर्नुहोस्, र त्यसपछि टोराका शब्दहरू उसको रगतमा निल्छन्। र उसले टोराहका शब्दहरूको आनन्द उठाएपछि, ऊ टोरासँग संलग्न भयो [र रशी सेन्हेड्रिन नोआको टिप्पणी हेर्नुहोस्। D.H. र गोंद]।
ती "गलत" सोच्छन् कि जो खुसी छ र अध्ययनको आनन्द लिन्छ, यसले उसको अध्ययनको धार्मिक मूल्यलाई हानि पुर्‍याउँछ, किनकि यो आनन्दको लागि गरिएको हो र स्वर्गको लागि होइन (= आफ्नै लागि)। तर यो गल्ती हो। आनन्द र आनन्दले कार्यको धार्मिक मूल्यलाई हटाउँदैन।
तर यो सिक्काको एउटा पाटो मात्र हो । त्यसपछि उसले आफ्नो अर्को पक्ष थप्छ:
र मोदिना, कि शिक्षार्थीले आफ्नो अध्ययनमा रमाइलो भएको कारणले मात्र अध्ययनको मित्वाको लागि होइन, किनकि उसले मत्जा खान्छ उसको लागि होइन, आफ्नै लागि होइन, किनभने उसले मत्जा खान्छ। रमाइलो खाने खातिर; अनि तिनीहरूले भने, "उनी उनको नाम बाहेक अरू कुनै कुरामा संलग्न हुनेछैनन्, जुन उनको दिमागबाट बाहिर छ।" तर उसले मिट्जवाहको खातिर सिक्छ र आफ्नो अध्ययनमा स्वाद लिन्छ, किनकि यो यसको नामको लागि अध्ययन हो, र यो सबै पवित्र छ, किनभने आनन्द पनि एक मित्वा हो।
अर्थात्, आनन्द र आनन्द कार्यको मूल्यबाट कम हुँदैन जबसम्म तिनीहरू साइड इफेक्टको रूपमा संलग्न हुन्छन्। तर यदि कुनै व्यक्तिले आनन्द र आनन्दको लागि सिक्छ, अर्थात् ती उसको सिकाइको प्रेरणा हुन्, त्यो निश्चित रूपमा आफ्नै लागि होइन। यहाँ तिनीहरू सही थिए "गलत।" हाम्रो शब्दावलीमा यो भनिन्छ कि अध्ययन केन्द्रापसारक रूपमा सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने सोच्नु उनीहरूको गल्ती होइन। यसको विपरीत, तिनीहरू बिल्कुल सही छन्। तिनीहरूको गल्ती यो हो कि आनन्द र आनन्दको अस्तित्वले उनीहरूको विचारमा यो केन्द्रापसारक कार्य हो भनेर संकेत गर्दछ। यो वास्तवमै आवश्यक छैन। कहिलेकाहीँ आनन्द र आनन्द भावनाहरू हुन् जुन सिक्ने परिणामको रूपमा मात्र आउँछन् र यसको कारणहरू गठन गर्दैनन्।
परमेश्वरको प्रेम मा फर्कनुहोस्
अहिलेसम्मका कुराहरूबाट निस्कने निष्कर्ष यो हो कि मैले सुरुमा वर्णन गरेको चित्र अपूर्ण छ, र अवस्था झन् जटिल छ। मैले प्रेम (केन्द्रापसारक) र वासना (केन्द्रापसारक) बीचको भिन्नता छुट्याएँ। त्यसपछि मैले भावनात्मक र बौद्धिक प्रेमको बीचमा छुट्याएँ, र हामीले देख्यौं कि माइमोनाइड्सलाई भावनात्मक प्रेमको सट्टा मानसिक-बौद्धिक चाहिन्छ। अन्तिम अनुच्छेदमा भएको विवरणले किन व्याख्या गर्न सक्छ।
जब प्रेम भावनात्मक हुन्छ, यो सामान्यतया यसको केन्द्रबिन्दु आयाम हुन्छ। जब म कुनै निश्चित व्यक्तिको लागि भावनात्मक प्रेमको बलियो अनुभूति महसुस गर्छु, तब मैले यसलाई जित्नको लागि गर्ने कार्यहरूले मलाई अपील गर्ने आयाम छ। म मेरो भावनालाई समर्थन गर्छु र मैले महसुस गरेको भावनात्मक कमीलाई भर्न चाहन्छु जबसम्म मैले यो प्राप्त गरेको छैन। यद्यपि यो प्रेम हो र वासना होइन, जबसम्म यसको भावनात्मक आयाम छ भने यसले कार्यको दोहोरो दिशा समावेश गर्दछ। म प्रेमी वा प्रियका लागि मात्र होइन, मेरो लागि पनि काम गर्छु। यसको विपरीत, भावनात्मक आयाम बिना शुद्ध मानसिक प्रेम, परिभाषा द्वारा एक शुद्ध केन्द्रापसारक कार्य हो। मसँग कुनै कमी छैन र म आफू भित्रका भावनाहरूलाई रोक्दैन कि मैले तिनीहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, तर केवल प्रियको खातिर काम गर्छु। त्यसैले शुद्ध प्रेम एक बौद्धिक, प्लेटोनिक प्रेम हो। यदि परिणामको रूपमा भावना सिर्जना भयो भने, यसले चोट पुर्‍याउन सक्दैन, तर जबसम्म यो परिणाम हो र मेरो कार्यहरूको कारण र प्रेरणाको अंश होइन।
यसले कसरी परमेश्वरको प्रेम, र सामान्यतया प्रेमलाई आदेश दिन सक्छ भन्ने प्रश्नको व्याख्या गर्न सक्छ (त्यहाँ पनि खुशी र अपरिचितको प्रेमलाई प्रेम गर्ने आज्ञा छ)। यदि प्रेम भावना हो भने यो सहज रूपमा उत्पन्न हुन्छ जुन ममा भर पर्दैन। त्यसोभए प्रेम गर्ने आज्ञाको अर्थ के हो? तर यदि प्रेम मानसिक निर्णयको नतिजा हो र भावना मात्र होइन, तब यसलाई मिलाउने ठाउँ छ।
यस सन्दर्भमा यो केवल एक टिप्पणी हो कि यो देखाउन सकिन्छ कि प्रेम र घृणा जस्ता भावनाहरूसँग व्यवहार गर्ने सबै आज्ञाहरू भावनामा होइन तर हाम्रो बौद्धिक आयाममा फर्किन्छन् । उदाहरणको रूपमा, R. Yitzchak Hutner ले एउटा प्रश्न ल्याउनुहुन्छ जुन उहाँलाई सोधिएको थियो कि माइमोनाइड्सले हागारलाई प्रेम गर्ने आज्ञालाई हाम्रो कोरममा कसरी गणना गर्छ, किनकि यो प्रेमलाई प्रेम गर्ने आज्ञामा समावेश छ। हागार एक यहूदी हो र जसरी उहाँ यहूदी हुनुहुन्छ भनेर प्रेम गर्नुपर्छ, त्यसोभए हागारलाई प्रेम गर्ने आज्ञाले के थप्छ? त्यसकारण, यदि म कुनै अपरिचितलाई प्रेम गर्छु किनभने त्यो यहूदी हो किनभने म हरेक यहूदीलाई प्रेम गर्छु, मैले अपरिचितलाई प्रेम गर्ने आज्ञा पालन गरेको छैन। त्यसकारण, RIA बताउँछ, यहाँ कुनै नक्कल छैन, र प्रत्येक mitzva को आफ्नै सामग्री र अस्तित्व को रूप छ।
यसको मतलब हागारलाई प्रेम गर्ने आज्ञा बौद्धिक हो र भावनात्मक होइन। यसमा उसलाई यस्तो र त्यस्ता कारणका लागि माया गर्ने मेरो निर्णय समावेश छ। यो त्यस्तो प्रेम होइन जुन म भित्र आफैंमा सहज रूपमा जगाउनु पर्छ। यस बारे टोलीको लागि केहि पनि छैन, किनकि mitzvos हाम्रो निर्णयहरूमा अपील गर्दछ र हाम्रो भावनाहरूमा होइन।
चियर्सको प्रेममा ऋषिहरूको उपदेशले हामीले गर्नै पर्ने कार्यहरूको संग्रह सूचीबद्ध गर्दछ। र यसरी माइमोनाइड्सले प्रभुको चौथो पदको सुरुमा राख्छन्, तर:
मिट्जभाले बिरामीहरूलाई भेट्न र शोक गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन, र मृतकहरूलाई बाहिर निकाल्न, र दुलहीलाई भित्र्याउन, र पाहुनाहरूलाई साथ दिन, र गाड्ने सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न, काँधमा बोक्ने, र उनको अगाडि लिलाक बोक्न र शोक गर्नुहोस् र खन्नुहोस् र गाड्नुहोस्, र दुलहा र दुलही, शिउरलाई आनन्दित गर्नुहोस्, यी सबै मतजाहहरू तिनीहरूका शब्दहरूबाट भए पनि, तिनीहरू सामान्य रूपमा छन् र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै माया गर्छन्, सबै चीजहरू जुन तपाईं अरूले तपाईंलाई गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ, तपाईं टोरा र मतजाहमा तिनीहरूलाई तपाईंको भाइ बनाउनुभयो।
एक पटक फेरि यस्तो देखिन्छ कि मायालु प्रेमको मित्वा भावनाको बारेमा होइन तर कर्मको बारेमा हो।
यो हाम्रो पर्साको श्लोकबाट पनि स्पष्ट हुन्छ जसले भन्छ:
आखिर, र त्यसपछि, र यसैले,
प्रेम व्यवहारमा परिणत हुन्छ। र त्यसै गरी पारशात एकेभका पदहरू (अर्को हप्ता भनिन्छ। व्यवस्था XNUMX: XNUMX):
अनि तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरका परमेश्वरलाई प्रेम गर्नू, र उहाँका आज्ञाहरू, उहाँका विधिहरू, उहाँका न्यायहरू, र उहाँका न्यायहरू, सबै दिनहरू पालन गर्नुपर्छ।
यसबाहेक, ऋषिहरूले व्यावहारिक निहितार्थहरूमा हाम्रो पर्समा श्लोकहरू पनि माग्छन् (ब्राचोट एसए एबी):
र हरेक राज्यमा - तान्या, आर एलिजर भन्छन्, यदि यो तपाइँको सम्पूर्ण आत्मामा भनिएको छ भने तपाइँको सम्पूर्ण देशमा किन भनिन्छ, र यदि तपाइँको सबै देशमा भनिन्छ भने तपाइँको आत्मामा किन भनिन्छ, जब सम्म तपाइँसँग छैन। जसको शरीर प्रिय छ, त्यसलाई सबै मदमा भनिन्छ।
के प्रेमले वस्तु वा त्यसको शीर्षकलाई अपील गर्छ?
मेरो दुई कार्ट र दोस्रो गेटमा बेलुन पुस्तकहरूमा मैले वस्तु र यसको विशेषताहरू वा शीर्षकहरू बीचको भिन्नता छुट्याएँ। मेरो अगाडिको टेबलमा धेरै सुविधाहरू छन्: यो काठले बनेको छ, यसको चार खुट्टाहरू छन्, यो अग्लो, आरामदायक, खैरो, गोलाकार र अधिक र अधिक छ। तर टेबल आफै के हो? कसै-कसैले भनेका छन् कि तालिका केही होइन तर विशेषताहरूको यो संग्रह हो (यसैले दार्शनिक लाइबनिजले मान्छन्)। त्यहाँ मेरो पुस्तकमा मैले तर्क गरें कि यो सत्य होइन। तालिका सुविधाहरूको संग्रह बाहेक अरू केहि हो। उहाँमा गुणहरू छन् भन्नु अझ सहि हो। यी लक्षणहरू उहाँका लक्षणहरू हुन्।
यदि कुनै वस्तु गुणहरूको संग्रह बाहेक अरू केही थिएन भने, त्यहाँ कुनै पनि गुणहरूको संग्रहबाट वस्तु सिर्जना गर्न कुनै बाधा थिएन। उदाहरण को लागी, मेरो छेउमा टेबल को वर्ग संग एक निश्चित व्यक्ति को औंला मा जेड पत्थर को तरकारी र हामी माथी cumulonimbus बादल को हावा पनि एक वैध वस्तु हुनेछ। किन छैन? किनभने यी सबै गुणहरू भएको कुनै वस्तु छैन। तिनीहरू विभिन्न वस्तुहरूसँग सम्बन्धित छन्। तर यदि कुनै वस्तु गुणहरूको संग्रह बाहेक केही होइन भने, त्यसो भन्न असम्भव छ। निष्कर्ष यो हो कि वस्तु गुणहरूको संग्रह होइन। त्यहाँ विशेषताहरूको संग्रह छ जुन यसको विशेषता हो।
लगभग सबै कुरा जुन वस्तुको बारेमा भनिन्छ, जस्तै तालिका, यसको गुणहरूको बारेमा कथन गठन हुनेछ। जब हामी यसलाई खैरो वा काठ वा अग्लो वा आरामदायक भन्छौं, यी सबै यसको सुविधाहरू हुन्। के यो पनि सम्भव छ कि कथनहरूले तालिका आफैं (यसको हड्डीहरू) सँग व्यवहार गर्न सक्छ? मलाई लाग्छ त्यहाँ यस्ता कथनहरू छन्। उदाहरणका लागि, तालिका अवस्थित छ भन्ने कथन। अस्तित्व तालिकाको विशेषता होइन तर तालिकाको बारेमा तर्क हो। वास्तवमा, माथिबाट मेरो कथन कि त्यहाँ विशेषताहरूको सेट भन्दा बाहिरको तालिकाको रूपमा यस्तो चीज छ भन्ने कथन हो कि तालिका अवस्थित छ, र यो स्पष्ट छ कि यसले यससँग मात्र व्यवहार गर्दछ र यसको सुविधाहरूसँग मात्र होइन। मलाई लाग्छ कि तालिका एउटै वस्तु हो र दुई होइन भन्ने भनाइ पनि आफ्नै बारेमा कथन हो र यसको वर्णन वा विशेषता होइन।
वर्षौं अघि मैले यो भिन्नताको सामना गर्दा मेरो एक विद्यार्थीले टिप्पणी गरे कि उनको विचारमा कसैको लागि माया पनि प्रेमीको हड्डीमा परिणत हुन्छ, न कि उसको गुणहरूमा। स्वभाव नै उहाँलाई भेट्ने बाटो हो, तर प्रेम गुणहरूमा होइन गुणको मालिकतर्फ फर्किन्छ, त्यसैले स्वभावहरू कुनै न कुनै रूपमा परिवर्तन भए पनि यो बाँच्न सक्छ। सायद पिरकेई अवोटमा ऋषिहरूले यसो भनेका छन्: र सबै प्रेम जुन केहिमा निर्भर हुँदैन - शून्य र शून्य प्रेम। "
वैदेशिक काममा प्रतिबन्धको अर्को व्याख्या
यो तस्विरले वैदेशिक श्रम प्रतिबन्धमा थप प्रकाश पार्न सक्छ। हाम्रो पर्शामा (र म बिन्ती गर्नेछु) टोराले विदेशी श्रमको निषेधलाई लम्ब्याउँछ। हफ्ताराह (यशैया अध्याय एम) यसको विपरीत पक्षको बारेमा पनि हो, परमेश्वरको गैर-पूर्ति:
Nhmo Nhmo Ami Iamr your Gd: Dbro on hearted Iroslm and Krao Alih Ci forth Tzbah Ci Nrtzh Aonh Ci Lkhh Mid Ikok Cflim Bcl Htatih: S. Cole Reader Wilderness Fno Drc Ikok Isro Barb Mslh Lalhino: Cl Gia and Cl Gia In र Hih Hakb Lmisor र Hrcsim Lbkah: Virtzer Majeker: Nadshading लाई शयन कक्षमा मार्न Irah Bzrao Ikbtz Tlaim and Bhiko Isa Alot Inhl: S. Who Mdd Bsalo water and Smim Bzrt Tcn र Cl Bsls Afr Earth र Skl Bfls Hrim र Gbaot Bmaznim: Who Tcn At wind Ikok र Ais Atzto Iodiano र Idbinho Iodiano र Irah Bsls Afr Earth Msft र Ilmdho बुद्धि र Drc Tbonot Iodiano: ay Goim Cmr Mdli र Cshk Maznim Nhsbo ay Aiim Cdk Itol: र Lbnon त्यहाँ Di Bar छैन र Hito त्यहाँ Di Aolh छैन: S Cl Hgoim Cain Ngdo Mafs र Tho Nhsbo: अल हू Tdmion भगवान र Mh Dmot Tarco उहाँलाई: Hfsl Nsc शिल्पकार र Tzrf Bzhb इरकानो र Rtkot चाँदी सुनार: Hmscn संसारमा जाने महान समय Th Cdk स्वर्ग र Imthm Cahl Lsbt: Hnotn Roznim Lain Sfti land Ctho Ash: क्रोध Bl Ntao क्रोध Bl Zrao क्रोध Bl Srs Bartz Gzam को Nsf Bhm र Ibso र Sarh Cks Tsam को समान: S. Al Who Tdmioni र Asoh Iamroak ऐनिकम र राव को ब्रा यी होमोत्जिया हुन् तिनीहरूको सेनाको संख्यामा सबैलाई प्रभुको नाममा उहाँले तिनीहरूमध्ये धेरैलाई बोलाउनुहुनेछ र बहादुरको शक्तिमा कोही पनि अनुपस्थित छैन:
यस अध्यायले Gd सँग शरीरको कुनै छवि छैन भन्ने तथ्यसँग सम्बन्धित छ। उहाँको लागि एक चरित्र सम्पादन गर्न र उहाँलाई हामीलाई परिचित भएको कुरासँग तुलना गर्न सम्भव छैन। त्यसोभए तपाईंले उहाँलाई कसरी सम्पर्क गर्नुहुन्छ? तपाईं यसलाई कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ वा यो अवस्थित छ भनेर महसुस गर्नुहुन्छ? यहाँका पदहरूले यसको जवाफ दिन्छन्: केवल बौद्धिक रूपमा। हामी उहाँका कार्यहरू देख्छौं र तिनीहरूबाट हामी निष्कर्षमा पुग्छौं कि उहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ र उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँले भूमिको संस्थाहरू बनाउनुहुन्छ (संसार सिर्जना गर्नुभयो) र भूमिको घेरामा बस्छ (यसलाई चलाउनुहुन्छ)। "हेर्नुहोस् कसले यक्राको नाममा सबैको लागि आफ्नो सेनाको संख्यामा खर्च गर्नेहरूलाई सिर्जना गर्यो।"
अघिल्लो खण्डको सर्तमा यो भन्न सकिन्छ कि Gd को कुनै रूप छैन, अर्थात्, यसमा हामीले बुझेका कुनै विशेषताहरू छैनन्। हामी यसलाई देख्दैनौं र यसको सम्बन्धमा कुनै संवेदी अनुभव पनि गर्दैनौं। हामी यसको कार्यहरूबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं (हस्तक्षेपी दर्शनको शब्दावलीमा, यसमा कार्य शीर्षकहरू छन् वस्तु शीर्षकहरू होइन)।
भावनात्मक प्रेम एक वस्तु तिर गठन गर्न सकिन्छ जुन हामीलाई प्रत्यक्ष बेच्छ, जुन हामीले देख्छौं वा अनुभव गर्छौं। अनुभव र प्रत्यक्ष संवेदी मुठभेड पछि, उत्पन्न हुने प्रेम हड्डीहरूमा परिणत हुन सक्छ, तर यसका लागि प्रियको शीर्षक र विशेषताहरूको मध्यस्थता चाहिन्छ। उहाँहरूमार्फत हामी उहाँसँग भेट्छौं। तसर्थ तर्क गर्न गाह्रो छ कि हामी केवल तर्क र बौद्धिक अनुमानहरु को माध्यम ले मात्र पुग्छौं, र हामी संग प्रत्यक्ष अवलोकन सम्पर्क गर्न को लागी कुनै पनि निकाय को लागी भावनात्मक प्रेम छ। मलाई लाग्छ कि बौद्धिक प्रेमको बाटो यहाँ मुख्य रूपमा खुला छ।
यदि त्यसो हो भने, यो कुनै अचम्मको कुरा होइन कि परशा र हफ्ताराहले परमेश्वरको अमूर्ततासँग व्यवहार गर्छन्, यदि पर्शाले उहाँलाई प्रेम गर्ने आज्ञा ल्याउँछन्। ईश्वरको अमूर्ततालाई आन्तरिक रूपमा हेर्दा, स्पष्ट निष्कर्ष यो छ कि उहाँप्रतिको प्रेम बौद्धिक स्तरमा मात्र हुनुपर्दछ र भावनात्मक स्तरमा होइन। भनिएको छ, यो कुनै हानि होइन किनकि हामीले देखेका छौं कि यो सबै भन्दा शुद्ध र सबैभन्दा पूर्ण प्रेम हो। यो मायाले उसलाई मायाको भावना पनि सृजना गर्न सक्छ, तर यो एक परिशिष्ट हो। ईश्वरको बौद्धिक प्रेमको अमूर्त अंश। यस्तो भावना प्राथमिक ट्रिगर हुन सक्दैन किनकि यसमा समात्न केहि छैन। मैले उल्लेख गरेझैं, प्रेमको भावना प्रियको छविमा बुझिन्छ, र यो भगवानमा अवस्थित छैन।
सायद यहाँ विदेशी श्रम निषेध मा अर्को आयाम देख्न सकिन्छ। यदि कसैले ईश्वरको लागि एक आकृति सिर्जना गर्दछ, यसलाई एक कथित वस्तुमा परिणत गर्ने प्रयास गर्दछ जससँग प्रत्यक्ष संज्ञानात्मक सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ, तब उहाँप्रतिको प्रेम भावनात्मक बन्न सक्छ, एक केन्द्रविन्दु चरित्र हो जसले प्रेमीलाई नभई प्रेमीलाई राख्छ। केन्द्र। Gd त्यसैले हाम्रो हफ्ताराहमा आन्तरिक रूपमा यसलाई नक्कल गर्न (यसलाई कुनै पनि चरित्रमा बनाउनको लागि) कुनै तरिका छैन भनेर माग गर्दछ, र त्यहाँ पुग्ने बाटो दार्शनिक-बौद्धिक हो, निष्कर्षहरू मार्फत। तसर्थ, उनको लागि प्रेम, जो मामला संग व्यवहार गर्दछ, पनि यस्तो चरित्र हुनेछ।
मलाई लाग्छ कि हामी मध्ये धेरैको धार्मिक धारणामा विदेशी कामका केही अंशहरू छन्। मानिसहरूले चिसो धार्मिक कार्यलाई बेफाइदा ठान्छन्, तर यहाँ मैले यसको अझ पूर्ण र शुद्ध आयाम रहेको देखाउने प्रयास गरेको छु। भावनात्मक प्रेम सामान्यतया परमेश्वरको कुनै न कुनै व्यक्तित्वमा टाँसिन्छ, त्यसैले यसले यसको सामान र विदेशी उपासनाबाट पीडित हुन सक्छ। मैले यहाँ थेसिसको पक्षमा तर्क गर्ने प्रयास गरेको छु कि ईश्वरको प्रेम बरु प्लेटोनिक, बौद्धिक र भावनात्मक रूपमा अलग्गै मानिन्छ।
 यो साँचो हो कि यदि लेभीको एमिग्डाला क्षतिग्रस्त भयो भने, उसले के गर्यो भनेर बुझ्न यो धेरै गाह्रो, र सम्भवतः असम्भव हुनेछ। भावनात्मक चोट भनेको के हो र यसले सिमोनलाई किन दुख्छ भनेर उसले बुझ्दैन। त्यसैले एमिग्डालामा लागेको चोटले उसलाई आफ्नो कार्यको अर्थ बुझ्न नदिने र उसले माफी माग्नुपर्छ भन्ने सोच्दैन। तर यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो amygdala को एक फरक प्रकार्य हो, जुन हाम्रो मामला मा कम महत्त्वपूर्ण छ। मेरो तर्क यो हो कि यदि सैद्धान्तिक रूपमा उसले बुझ्छ कि उसले साइमनलाई चोट पुर्याएको छ भने पनि यसले उसलाई पीडा दिएको छैन, माफीको लागि अनुरोध पूर्ण र शुद्ध छ। उहाँका भावनाहरू साँच्चै महत्त्वपूर्ण छैनन्। यो सत्य हो कि प्राविधिक रूपमा त्यस्तो भावना नहुँदा उसले त्यसो नगरेको हुन सक्छ किनभने उसले कार्यको गम्भीरता र यसको अर्थ बुझेको थिएन। तर यो विशुद्ध प्राविधिक विषय हो । यो मेरो उद्घाटनसँग सम्बन्धित हुन सक्छ कि यो दिमाग हो जसले निर्णय गर्दछ, र यसले भावनाहरूलाई विचार गर्नुपर्ने कारकहरू मध्ये एकको रूपमा लिन्छ।
यसले मलाई मस्तिष्क क्षतिग्रस्त र भावनाहरू अनुभव गर्न नसक्ने एक न्युरोलोजिस्टबाट TED मा एक पटक सुनेको व्याख्यानको सम्झना गराउँछ। तिनले यी भावनात्मक कार्यहरूलाई प्राविधिक रूपमा नक्कल गर्न सिकिन्। जोन न्यास जस्तै (सिल्भिया नासेरको पुस्तक, वन्डर्स अफ रिजन, र त्यसपछिको फिल्मका लागि चिनिन्छ), जसले काल्पनिक मानव वातावरणको अनुभव गरे र यसलाई पूर्णतया प्राविधिक रूपमा बेवास्ता गर्न सिके। उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ साँच्चै उहाँको वरिपरि मानिसहरू छन्, तर उनले थाहा पाए कि यी भ्रमहरू थिए र अनुभव अझै पनि पूर्ण बलमा उहाँ भित्र अवस्थित भए तापनि उहाँले तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो छलफलको उद्देश्यको लागि, हामी लेवीलाई भावनात्मक समानुभूति क्षमता नभएको एमिग्डालाको रूपमा सोच्नेछौं, जसले बौद्धिक र चिसो (भावना बिना) बुझ्न सिकेको छ कि त्यस्ता वा अन्य कार्यहरूले मानिसहरूलाई हानि पुर्‍याउँछ, र तिनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न माफी खोज्नु पर्छ। यो पनि मान्नुहोस् कि माफीको लागि अनुरोध उसलाई महसुस गर्ने व्यक्तिको लागि जत्तिकै गाह्रो छ, अन्यथा यो तर्क गर्न सकिन्छ कि यदि उसले गर्ने व्यक्तिबाट मानसिक मूल्य लिदैन भने यस्तो कार्यको प्रशंसा गर्न सकिँदैन।
 यसलाई ताल्मुडिक तर्क शृङ्खलाको एघारौं पुस्तक, द प्लेटोनिक क्यारेक्टर अफ द ताल्मुड, माइकल अव्राहम, इजरायल बेल्फर, डोभ गाबे र उरी शिल्ड, लन्डन २०१४, दोस्रो भागमा विस्तृत रूपमा हेर्नुहोस्।
 माइमोनाइड्सले यसको जरामा बताउँछ कि अर्को ग्राहकको मिट्जभा भन्दा बाहिरको केहि नविकरण नगर्ने डबल मिट्जभोटलाई गणना गरिनु हुँदैन।
 र परिपक्वतालाई प्रेम गर्ने आज्ञा जस्तै होइन। त्यहाँ हाम्रो टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्।
 यद्यपि यी शास्त्रीहरूका शब्दहरूबाट आएका आज्ञाहरू हुन्, र स्पष्ट रूपमा दौरिता आज्ञा भावनामा हो, तर जसले आफ्नो सँगी मानिसप्रतिको प्रेमबाट यी कर्महरू गर्दछ उसले पनि यसमा पूरा गर्दछ। तर यहाँ माइमोनाइड्सको भाषामा कुनै बाधा छैन कि वास्तवमा प्रशंसाको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने दौरिता मिट्ज्वा पनि मानसिक हुन सक्छ र भावनात्मक हुन सक्दैन जुन हामीले यहाँ व्याख्या गरेका छौं।
 मैले त्यहाँ व्याख्या गरेझैं, यो भिन्नता वस्तु र केस वा पदार्थ र रूप बीचको एरिस्टोटेलियन भिन्नतासँग सम्बन्धित छ, र कान्टको दर्शनमा कुरा आफैं (नुमाना) बीचको भिन्नतासँग सम्बन्धित छ जुन हाम्रो आँखामा देखिन्छ। घटना)।
 योराम ब्रोनोस्की द्वारा अनुवादित टिब्बाहरूमा मैले अर्जेन्टिनाका लेखक बोर्जेसको प्रतिभाशाली कथा "ओचबर, टेलेन, आर्टियस" बाट दिएका उदाहरणहरू हेर्नुहोस्।
 मैले त्यहाँ देखाएको छु कि ईश्वरको अस्तित्वको लागि ओन्टोलॉजिकल तर्कबाट यसमा प्रमाण ल्याउन सकिन्छ। यदि कुनै चीजको अस्तित्व उसको विशेषता हो, किनभने तब ईश्वरको अस्तित्व उहाँको अवधारणाबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ, जुन असम्भव छ। यद्यपि साइटमा पहिलो नोटबुकमा यस तर्कको विस्तृत छलफल हेर्नुहोस्। त्यहाँ मैले तर्क निराधार छैन (आवश्यक नभए पनि) देखाउने प्रयास गरें।
स्वर्गीय आर. बिन्यामिन डेभिड लेवीको प्रस्थान पछिको प्रतिबिम्ब (स्तम्भ 124)
दारुश, काली मिर्च, इजरायलको प्रेम र यसको सद्गुण (स्तम्भ 52)
मैले मन पराएको भूमिका गीतहरू: होमल्याण्ड पाठमा एक सौन्दर्य दृष्टिकोण (स्तम्भ 153)
"प्रेममा: भावना र दिमाग बीच (स्तम्भ 16)" मा 22 विचारहरू
30 तिश्री 10 - 2016/12/11 XNUMX:XNUMX बजे
'बौद्धिक प्रेम' को अर्थ के हो, किनकि प्रेम भावना हो?
वा यो एक गल्ती हो र के यो वास्तवमा अर्को सन्दर्भ र जडानको अर्थ हो - र 'मानसिक' मा इरादा विश्लेषणात्मक समझको लागि होइन तर अन्तर्ज्ञानको लागि हो जुन सही कुरा हो?
र प्रेमबाट दृष्टान्तको लागि, यसको मतलब यो होइन कि प्रेम भावनात्मक छ, तर दृष्टान्तको सार यो तथ्य हो कि एक व्यक्तिले सधैं गल्ती गर्न सक्दैन .. र कुनै पनि क्षणमा प्राप्त गर्न सक्ने सकारात्मक मात्र होइन ... हुनसक्छ यो तथ्य हो कि यो अन्तर्ज्ञानले सम्पूर्ण व्यक्तिलाई 'जित' गर्छ के उनी चम्किन्छिन् ...
होइन भन्ने मेरो तर्क छ । भावना प्रायः प्रेमको संकेत हो र आफैलाई प्रेम होइन। प्रेम आफैंमा विवेकको निर्णय हो, बाहेक भावना उठ्यो भने सायद निर्णय गरेको छु ।
विश्लेषणात्मक हुनुको अर्थ मैले बुझिनँ । यो एक निर्णय हो कि यो गर्न को लागी सही कुरा हो, माइमोनाइड्सले दोस्रो पदमा लेखे।
यदि दृष्टान्तले मेरो कर्तव्य स्पष्ट गर्न आउँदैन भने, यसको मतलब के हो? उनी आफैले मलाई के हुने हो भन्छिन् ? उहाँ सायद मेरो कर्तव्य के हो भनेर वर्णन गर्न आउनुभयो।
30 तिश्री 10 - 2016/12/13 XNUMX:XNUMX बजे
स्पष्ट रूपमा त्यहाँ 'प्रेमबाट काम' मा भिन्नता छ जसमा रब्बीले पोस्टसँग व्यवहार गरे, र 'मिट्जवोट आभाट हा' (जसमा माइमोनाइड्सले येशुआटका कानूनहरूसँग व्यवहार गर्छन्)…।
Halachot Teshuvah मा माइमोनाइड्सले नामको उपासना गर्न ईडन ल्याउँछ भन्ने कुराको बारेमा व्यवहार गर्दछ - र वास्तवमा रब्बीका शब्दहरू विश्वस्त छन् ...
तर मित्ज्वाह भएको कारणले, Gd को प्रेमको मित्वाले व्यक्तिलाई काममा ल्याउने कुरासँग व्यवहार गर्दैन, तर विकास गर्न उसको दायित्व हो (हगली तालको शब्दहरू जस्तै - कर्तव्यको आधा विकास गर्ने आनन्द) ... सृष्टि अवलोकन गर्दै
पुरा सहमत। यो साँच्चै टोरा र Teshuvah को आधारभूत कानून बीच सम्बन्ध हो। र अझै पनि H. Teshuvah मा उहाँले सत्य गर्न प्रेमको पहिचान गर्नुहुन्छ किनभने यो सत्य हो। त्यो र भावना बीच के छ? दुबै ठाउँमा जुन प्रेम संग जोडिएको छ, त्यही प्रेम नै हुने सम्भावना छ । प्रारम्भिक टोराहमा उनले लेखेका छन् कि सृष्टि अवलोकन गरेर प्रेम प्राप्त हुन्छ (यो निष्कर्ष मैले कुरा गरिरहेको छु), र टेशुभमा उनले प्रेमबाट काम गर्ने सन्दर्भमा यसको अर्थ सत्य गर्नु हो भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ। र ती मेरा शब्दहरू हुन्।
विस्मयको अवधारणा पक्कै पनि येशिव र हलचोट तेशुवा बीच फरक छ
यो धेरै अनौठो तर्क हो। पैसा कमाउनको लागि काम गर्ने र पैसा मार्फत केहि किन्नको बारेमा कुरा गर्दा, "पैसा" शब्द फरक अर्थमा देखा पर्दछ? त्यसोभए किन जब तपाइँ प्रेम महसुस गर्नुहुन्छ वा जब तपाइँ प्रेमबाट केहि गर्नुहुन्छ, "प्रेम" शब्द दुई फरक अर्थमा देखा पर्दछ?
विस्मयको सन्दर्भमा, उच्चताको डर र सजायको डर बीचको सम्बन्धलाई पनि छलफल गर्नुपर्छ। यदि एउटै अवधारणा प्रयोग गरिन्छ भने यसको समान अर्थ हुनुपर्छ, वा कम अर्थहरू बीच पर्याप्त जडान भएको हुनुपर्छ। दुबै अवस्थामा विस्मय एउटै छ, र भिन्नता के डर, सजाय वा उच्चता जगाउँछ भन्ने प्रश्नमा छ।
Halacha C मा व्याख्या मलाई अलि संकीर्ण लाग्छ।
माइमोनाइड्सका शब्दहरूबाट प्रयोगात्मक आयामलाई अलग गर्न गाह्रो छ र उहाँले "टोराहको रद्द" को चेतावनी मात्र दिनुहुन्छ। यसले पक्कै पनि ईश्वर-प्रेमीको गहिरो अनुभवलाई वर्णन गरेको देखिन्छ कि संसारमा उहाँलाई चिन्ता गर्ने एक मात्र चीज ईश्वरको प्रेम हो। भावनात्मक अनुभवले प्रेमीलाई केन्द्रमा राख्छ र एक्लो प्रेमले मात्र प्रेमीलाई केन्द्रमा राख्छ भन्ने लेखको धारणामा म बिल्कुल सहमत छैन। मलाई लाग्छ कि चिसो अलगाव भन्दा माथि एक स्तर छ र यो हो जब प्रेमी को इच्छा प्रेमी को इच्छा संग विलय हुन्छ र प्रेमी को इच्छा को पूर्ति प्रेमी को इच्छा को पूर्ति बन्छ र यसको विपरीत। "उहाँको इच्छा अनुसार गर्नुहोस्" मा। यस प्रेममा, बीचमा प्रेमी वा प्रियजनको बारेमा कुरा गर्न सम्भव छैन तर दुबैको साझा इच्छाको बारेमा। मेरो विचारमा, माइमोनाइड्सले यो कुरा बोल्छन् जब उसले परमेश्वरको प्रेमीको इच्छाको कुरा गर्छ। यसले सत्यको कामको विरोध गर्दैन किनभने यो एक सत्य हो जुन सत्यको इच्छाबाट उत्पन्न हुन सक्छ।
1. मलाई यो त्यति गाह्रो लाग्दैन। मैले दृष्टान्तहरूको सही उपचारमा टिप्पणी गरें।
2. लेखमा धारणा यो होइन कि भावनात्मक अनुभवले प्रेमीलाई केन्द्रमा राख्छ, तर यो सामान्यतया यस्तो आयाम पनि हुन्छ (यो संलग्न छ)।
यो रहस्यमय संगतको कुरा मेरो लागि धेरै गाह्रो छ र मलाई लाग्दैन कि यो व्यावहारिक छ, विशेष गरी भगवान जस्तो अमूर्त र अमूर्त वस्तुको लागि, मैले लेखेको छु।
4. यो सत्यको कार्यको विरोधाभास नहुन सक्छ किनभने यो सत्य हो, तर यो पक्कै पनि उसको लागि समान छैन। Maimonides प्रेम संग यो पहिचान।
30 तिश्री 10 - 2016/12/14 XNUMX:XNUMX बजे
सामान्य रूपमा, रोचक र विचार उत्तेजक।
एकै समयमा, Maimonides मा अर्थ 'थोरै दुःखी' मात्र होइन, र ठूलो अत्यावश्यकता पनि होइन, यो केवल एक विकृति (क्षमामा) हो। माइमोनाइड्सले भावनात्मक अवस्थाको वर्णन गर्न सक्दो प्रयास गर्नुभयो, र तपाईंले उसलाई भन्न दबाब दिनुभयो कि यो अझै पनि तर्कसंगत र अलगावको कुरा हो (जसरी तपाईंले यसलाई परिभाषित गर्नुहुन्छ) [र दृष्टान्तहरूको सम्बन्धमा 'असफलता' मा टिप्पणी हाम्रोमा विश्वासयोग्य छैन। सन्दर्भ, किनभने यहाँ केवल दृष्टान्तहरूलाई बेवास्ता गर्दैन]।
भावनाको सारको रूपमा सामान्य प्रश्नको लागि, यो ध्यान दिनु पर्छ कि प्रत्येक भावना केहि मानसिक अनुभूति को परिणाम हो। सर्पको डर हाम्रो ज्ञानबाट उत्पन्न हुन्छ कि यो खतरनाक छ। सानो बच्चा सर्पसँग खेल्न डराउँदैन।
तसर्थ भावनालाई केवल एक वृत्ति हो भन्नु गलत हो। एक वृत्ति हो जुन केहि धारणा को परिणाम को रूप मा सक्रिय छ। तसर्थ, जो व्यक्तिको मस्तिष्कमा क्षति पुगेको छैन, र कसैलाई चोट पुर्‍याएपछि उसमा कुनै भावना उत्पन्न हुँदैन, उसको नैतिक धारणा दोषपूर्ण हुन्छ।
मेरो विचारमा, यो पनि Maimonides को मनसाय हो। जसरी मानिसमा सत्यको चेतना बढ्दै जान्छ, त्यति नै उसको हृदयमा प्रेमको भावना पनि बढ्दै जान्छ। मलाई लाग्छ कि चीजहरू पछि अध्यायमा स्पष्ट छन् (हलाचा XNUMX):
यो एक ज्ञात र स्पष्ट कुरा हो कि भगवानको प्रेम एक व्यक्तिको हृदयमा बाँधिएको छैन - जबसम्म उसले यसलाई सधैं ठीकसँग प्राप्त गर्दैन र संसारमा सबै कुरा छोड्दैन, जसरी उसले आज्ञा दियो र भन्यो 'आफ्नो सारा हृदय र आफ्नो सम्पूर्ण आत्माले। ' - तर एक राय संग उसलाई थाहा थियो। र विचार अनुसार, प्रेम हुनेछ, यदि थोरै र यदि धेरै धेरै।"
यहाँ स्पष्ट: ए। प्रेम भनेको मानिसको मनमा बाँधिएको भावना हो।
बि. टोरामा भएको आज्ञा भावनाको बारेमा हो।
तेस्रो। किनकी यो भावना दिमागको परिणाम हो,
परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने आज्ञाको अर्थ परमेश्वरको मनमा गुणा गर्नु हो।
मैले यहाँ माइमोनाइड्सका शब्दहरूमा यो भावना हो भनेर देखेको छैन। यो एक चेतना हो तर आवश्यक छैन कि एक भावना हो। तपाईले मेरो टिप्पणीमा उभिएको B र C बीचको सम्बन्धलाई पनि बेवास्ता गर्नुहुन्छ।
तर यी सबै भन्दा माथि, तपाइँको शब्दहरूमा मलाई सैद्धान्तिक रूपमा कुनै समस्या छैन, किनकि तपाइँको विधिमा अझै पनि हामीमा जिम्मेवार कार्य भनेको भावनात्मक काम हो, जान्न र जान्न, र भावना होइन। अनुभूति यदि यो परिणामको रूपमा सिर्जना भयो भने - सिर्जना हुनेछ, र यदि छैन भने - त्यसपछि होइन। त्यसैले अन्तमा हाम्रो नियन्त्रण बिना भावना उत्पन्न हुन्छ। जानकारी र सिकाइ हाम्रो हातमा छ, र भावना अधिकतर परिणाम हो। त्यसोभए तपाईले प्रस्ताव गर्नुभएको र मैले लेखेकोमा के फरक छ?
एक व्यक्ति को लागी एक CPM जसको मस्तिष्क क्षतिग्रस्त छ र प्रेम गर्न असमर्थ छ। के यस्तो व्यक्तिले परमेश्वरको प्रेमको आज्ञा पालन गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ? मेरो विचारमा हो।
अन्त्यमा, यदि तपाईंले रामबममा प्रश्नमा हलाखालाई उद्धृत गरिसक्नुभएको छ भने, तपाईंले किन अवरोध गर्नुभयो? यहाँ पूर्ण भाषा छ:
यो ज्ञात र स्पष्ट छ कि धन्यको प्रेम एक व्यक्तिको हृदयमा बाँधिएको छैन जबसम्म उसले सधैं सही रूपमा प्राप्त गर्दैन र संसारमा सबै कुरा छोड्दैन, जसरी उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र आफ्नो सम्पूर्ण हृदय र आत्माले भन्नुभयो, "धन्य एक। थोरै र धेरैलाई माया गर्दैन, त्यसैले मानिसले आफैंले बुझ्नुपर्छ र बुद्धि र बुद्धिमा शिक्षित हुनुपर्दछ जसले उसलाई उसको कोनोको शक्तिको रूपमा सूचित गर्दछ जुन मानिसले बुझ्ने र हासिल गर्नुपर्दछ जुन हामीले टोराको आधारभूत नियमहरूमा देखेका छौं।
यो हाम्रो लागि स्पष्ट छ कि यो एक विचार हो र भावना होइन। र अधिकतर भावना दिमागको उत्पादन हो। भगवानलाई माया गर्ने कर्तव्य भावनामा होइन मनमा हुन्छ। र मस्तिष्क क्षतिग्रस्त को लागी NPM।
र त्यहाँ प्राप्त गर्न रब्बीको शब्दहरूमा समाप्त नहुन कसरी सम्भव छ:
केहि ज्ञात र स्पष्ट, आदि। AA मूर्खता हो जुन हामीलाई थाहा थिएन किन यो दिशाको कुरा हो, र हामी यसलाई दुईवटा कुरामा व्याख्या गर्छौं एउटा कविताको भाषामा डेभिडलाई मूर्खताको रूपमा, र अर्को कुरा उसको प्रेमको लागि तपाईंको मामिलामा प्राप्त हुनेछ जुन तपाईंले तिर्नुहुन्न। तिनीहरूलाई ध्यान दिनुहोस्
अहिले सम्म यो साँझ को लागी धेरै राम्रो छ।
1. मेरो विचारमा 'व्यक्तिको हृदयमा बाँधिएको' भनाइ चेतना भन्दा भावनाका लागि बढी उपयुक्त छ।
2. B र C बीचको सम्बन्ध कारण र प्रभाव हो। त्यो हो: मनले प्रेममा डोर्याउँछ। प्रेमले यसको नाममा काम ल्याउँछ (यो प्रेम होइन तर 'प्रेमबाट काम' हो, अर्थात्: प्रेमबाट उत्पन्न हुने काम)।
Maimonides को शब्द मा Seder विषय संग सम्बन्धित छ - उनको विषय भगवान को प्रेम को आज्ञा हैन (यो टोरा को जग को विषय हो) तर भगवान को काम, र जब उहाँ उत्कृष्ट काम को व्याख्या गर्न आउनुहुन्छ। उसले यसको चरित्र (यसको नाम - II) र यसको स्रोत बताउँछ, र पछि यो प्रेम कसरी पुग्ने भनेर वर्णन गर्दछ (Da'at - HV)।
Halacha XNUMX को अन्त्यमा माइमोनाइड्सका शब्दहरूमा यो व्याख्या गरिएको छ: "र उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दा, उहाँले तुरुन्तै सबै आज्ञाहरू प्रेमबाट बनाउनुहुनेछ।" त्यसपछि हलचा सी मा उचित प्रेम के हो भनेर व्याख्या गर्दछ।
3. हाम्रा शब्दहरू बीचको भिन्नता धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मेरो विचारमा, मिट्ज्वाको पालना भावनामा छ, त्यो हो: भावना धेरै केन्द्रीय छ र केही सीमान्त र अनावश्यक उत्पादन होइन। जसले 'प्लैटोनिक र अलगावित 'परमेश्वरको प्रेम' देख्छ उसले मित्ज्वालाई राख्दैन। यदि उनी एमिग्डालामा घाइते भएमा उनी केवल बलात्कार हुन्।
4. माइमोनाइड्सको भाषाको निरन्तरताबाट के उद्धरण थपियो मैले बुझिन
("परमेश्वरलाई माया गर्दैन [तर विचारमा ...]" शब्दहरू फ्रेन्केल संस्करणमा देखा पर्दैन, त्यसैले मैले तिनीहरूलाई उद्धृत गरेको छैन, तर अर्थ एउटै हो। ढाँचाहरूको शब्दको रूपमा प्रेम "तर यो स्पष्टताको लागि मात्र थियो, र यहाँ पनि अर्थ उस्तै छ)
1. राम्रो। म यसको बारेमा निश्चित छैन।2. म यी सबैसँग सहमत छु। र अझै पनि सत्य गर्नुहोस् किनभने यो एक सत्य हो जुन मलाई प्रेमको भावनासँग सम्बन्धित छैन तर एक संज्ञानात्मक निर्णयसँग (सायद प्रेमको भावनाले साथ दिन्छ, यद्यपि यो आवश्यक छैन। मेरो अघिल्लो पोस्ट हेर्नुहोस्)।
3. त्यसोभए म सोधिरहन्छु किन हामीलाई आफैंमा उत्पन्न हुने कुराको लागि टोली बनाउने? प्रायः मित्जवाह भनेको ज्ञान र बौद्धिक कार्यलाई गहिरो बनाउनु हो, र त्यस पछि स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुने प्रेम (विश्वासीलाई धन्य हो) तपाईले यो गर्नुभयो भन्ने संकेत हो। तसर्थ जसको मन बिग्रिएको छ, उसले बलात्कार गर्दैन, बरु मितत्वको पूर्ण पालना गर्छ। हामीसँग यसको कुनै संकेत छैन, तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ र उत्तम हुनुहुन्छ।
4. माइमोनाइड्सको भाषाको निरन्तरताबाट उद्धरणले प्रेम र जान्ने बीचको पहिचानको कुरा गर्छ, वा बढीमा त्यो प्रेम जान्नको साइड इफेक्ट हो।
हामीले हाम्रा अडानहरू पर्याप्त रूपमा स्पष्ट गरिसकेका छौं जस्तो लाग्छ।
तपाईको पुनरावर्ती प्रश्नको बारेमा: चीजहरू धेरै सरल छन्।
भगवानले हामीलाई महसुस गर्न आदेश दिनुहुन्छ। हो!
तर त्यसको उपाय के हो ? राय गुणा गर्न।
विद्वान शैली: मिट्ज्वा को पालन - भावना, मिट्ज्वा को कार्य - राय को बहुलता।
(रब्बी सोलोविचिकका शब्दहरू केही मिट्जोसको सन्दर्भमा प्रसिद्ध छन्: प्रार्थना,
तर र जवाफ दिनुहोस्, कि मित्ज्वाको पालन हृदयमा छ)।
यदि तपाईं यसको सैद्धान्तिक सम्भावनालाई स्वीकार गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने 'भावनाहरूको ख्याल गर्नुहोस्
हाम्रो र हाम्रो कार्य र विचारबाट मात्र होइन, त्यसैले चीजहरू धेरै बुझ्न योग्य छन् र कुनै पनि अचम्मलाग्दो छैन।
त्यसोभए भावना एक अनावश्यक 'उप-उत्पादन' मात्र होइन, तर मित्वाको शरीर हो।
(र यहाँ लोभ नगर्ने बारे रब'a को प्रसिद्ध शब्दहरू सम्बन्धित छन्।
त्यहाँ उहाँले उही सिद्धान्त प्रयोग गर्नुहुन्छ: यदि तपाईंको चेतना इमानदार छ,
कुनै पनि अवस्थामा, लोभको भावना उत्पन्न हुनेछैन)
तपाईं वास्तवमा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि भावना अनुसार नभई बुद्धि अनुसार काम गर्ने व्यक्ति स्वतन्त्र मानिस मात्र हो, उदाहरणका लागि, भगवानको प्रेम बौद्धिक छ भावनात्मक होइन, तर जस्तो देखिन्छ कि यो एक व्यक्तिको रूपमा भन्न सकिन्छ। जसले आफ्नो भावनालाई रोक्छ त्यो उनीहरूसँग बाँधिएको हुन्छ र स्वतन्त्र मानिस होइन, त्यसैले आफ्नो मनमा बाँधिएको दिमाग अनुसार काम गर्ने व्यक्तिले स्वतन्त्र होइन, तपाइँ पनि प्रेमको बारेमा विशेष रूपमा दाबी गर्नुहुन्छ कि भावनात्मक सर्वोच्च प्रेम भावनात्मक छ किनभने यो हो। भावनालाई (आफैलाई) समर्थन गर्नको लागि अर्कोतिर फर्किने बुद्धिले होइन तर यो बुद्धिले पनि आफूलाई जोगाउँछ, यी दुई अवस्थामा अहंकारमा कसरी भिन्नता छ ?
म तपाईलाई सम्झाउँछु कि हामीले कुरा गरेपछि तपाईले छलफलको आनन्द लिनुभयो र तपाईले मलाई भन्नुभयो कि तपाईले यस विषयमा लेख्नु पर्छ कि हलाचा अनुसार आफ्नो जीवन चलाउने व्यक्ति मात्र एक तर्कसंगत व्यक्ति हो, र ताल्मुड र हलाचाको विशिष्टताको बारेमा अमूर्त विचारहरू लिन। र तिनीहरूलाई व्यवहारमा प्रशोधन गर्नुहोस्।
मन र भावना समान स्थितिका दुई फरक कार्य हुन् भन्न सकिन्छ। तर एक मानसिक निर्णय मा इच्छा सम्मिलित छ जबकि भावना एक वृत्ति हो जुन मलाई बाध्य पारिएको छ। मैले यसलाई मेरो स्वतन्त्रता विज्ञान पुस्तकहरूमा विस्तार गरेको छु। रिमाइन्डर को लागी धन्यवाद। सायद म साइट मा यसको बारेमा एक पोस्ट लेख्नेछु।
मलाई लाग्छ यसले तपाईंलाई चासो दिनेछ http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/med_and_physiol/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%92%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
यस्ता धेरै छलफलहरू छन्, र तीमध्ये धेरैजसो वैचारिक अस्पष्टताबाट ग्रस्त छन् (भावना र दिमागलाई परिभाषित नगर्नुहोस्। जे होस्, मेरो शब्दहरूसँग यसको कुनै सरोकार छैन किनभने यसले मस्तिष्क गतिविधिको बारेमा कुरा गर्छ र म सोचाइको बारेमा कुरा गर्छ। सोचाइमा गरिन्छ। दिमाग होइन दिमाग। उसले सोच्दैन किनभने उसले त्यसो गर्ने निर्णय गर्दैन र उसले "विचार गर्दैन।" स्नायु विज्ञानले मस्तिष्कको गतिविधि = सोचाइलाई मान्दछ, र मैले यो लेखेको छु कि यस अनुसार बग्ने पानी पनि सोचमा संलग्न हुन्छ। गतिविधि।
26 सिवन 06 - 2019/20/42 XNUMX:XNUMX बजे
कथित लेखको अर्को खण्डमा, T.S. म वर्ग कोष्ठकमा संकेत गर्नेछु:
“अर्थात्, आनन्द र आनन्दले कार्यको मूल्यलाई कम गर्दैन जबसम्म तिनीहरू साइड इफेक्टको रूपमा संलग्न छन्। तर यदि कुनै व्यक्तिले आनन्द र आनन्दको लागि सिक्छ, अर्थात् ती उसको सिकाइको प्रेरणा हुन्, त्यो निश्चित रूपमा आफ्नै लागि होइन। यहाँ तिनीहरू सही थिए "गलत।" हाम्रो शब्दावलीमा यो भनिएको छ कि तिनीहरूको गल्ती यो होइन कि उनीहरूले अध्ययन केन्द्रापसारक तरिकाले सञ्चालन गर्नु हुँदैन [= केन्द्रापसारक सेल]। यसको विपरीत, तिनीहरू बिल्कुल सही छन्। तिनीहरूको गल्ती यो हो कि आनन्द र आनन्दको अस्तित्वले उनीहरूको विचारमा यो एक केन्द्रापसारक कार्य हो [= केन्द्रापसारक सेल] हो। यो वास्तवमै आवश्यक छैन। कहिलेकाहीँ आनन्द र आनन्द भावनाहरू हुन् जुन सिक्ने परिणामको रूपमा मात्र आउँछन् र यसको कारणहरू गठन गर्दैनन्।
2. प्रेम सम्बन्धमा रामबमका दुई छेउछाउका नियमहरूमा रहेको "विरोधाभास" तपाईंले पछि ल्याउनुभएको र टोटोडीमा व्याख्या गरेको मणिको शीतका शब्दहरू जस्तो मात्र मिल्यो। माइमोनाइड्सले यहाँ परमेश्वरको प्रेमको बारेमा भनेको कुरा यही हो। यो एक मानसिक कारण छ, र एक भावनात्मक परिणाम। उनले टोरा पीबीको आधारभूत नियमहरूमा आफूले बोलेको प्रेमको पनि व्याख्या गर्दछ [जहाँ उसले भावना र प्रशंसाको पनि वर्णन गर्दछ, र जहाँ यसलाई कुनै दृष्टान्तको रूपमा दिइँदैन, तर प्रेम के हो भनेर वर्णन गरिएको छ ताकि स्पष्टीकरण नहोस्। त्यहाँ लागू गर्नुहोस्]। ईश्वरको बुद्धि र गुणहरूको सृष्टि र मान्यतालाई अवलोकन गर्दै। तथ्यात्मक-सचेतन / मानसिक कारण - एक भावनात्मक परिणाम [भी] उत्पादन गर्दछ। र ठ्याक्कै यही उहाँले यहाँ पनि भन्नुभयो।
26 सिवन 06 - 2019/20/57 XNUMX:XNUMX बजे
1. धेरै सत्य। मैले फिक्स गरें।
2. यहाँ म सहमत छैन। महल तेशुवाहका अनुसार दुई हलचाहमा त्यस्तो भिन्नता देखिँदैन।
'नि: शुल्क प्रेम' - वस्तुको भागमा र यसको शीर्षकहरूको भागमा होइन
Tammuz 16 को 07 औं - 2020/17/39 XNUMX:XNUMX बजे
यहाँ हड्डीको भागमा प्रेम र शीर्षकहरूको भागमा प्रेम बीचको भिन्नताको प्रकाशमा - रब्बी कुकद्वारा निर्मित 'स्वतन्त्र प्रेम' को अवधारणा बुझ्न सम्भव छ।
कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा नेतृत्वहरू यति अपमानजनक हुने अवस्था छ कि उसमा कुनै पनि राम्रो गुण महसुस गर्न सकिँदैन जसले उसप्रतिको प्रेमको स्वाभाविक भावना जगाउनेछ।
यस्तो अवस्थामा, 'हड्डीमा माया' मात्र हुन सक्छ, 'B'Tselem मा सिर्जना गरिएको व्यक्तिको मनपर्ने' वा 'इजरायलको मनपर्ने केटाहरूलाई ठाउँमा बोलाइएको' भन्ने गुणले मात्र व्यक्तिको लागि प्रेम, जो 'भ्रष्ट केटाहरू' को तल्लो कर्तव्यमा पनि 'केटाहरू' भनिन्छ, उहाँका छोराहरूप्रति धेरै 'पिताको दया' हुन्छ।
तर, यो ध्यान दिनु पर्छ कि छोराछोरीलाई गरिब अवस्थामा पनि बाबुको माया 'नि:शुल्क माया' मात्र होइन। जबरजस्ती केटाहरूमा लुकेको असल कुरा पनि फलोस् भन्ने आशाले पोषित हुन्छ । आफ्ना छोराछोरीहरूमा र सृष्टिकर्ताको आफ्ना मानिसहरूमा बुबाको बलियो विश्वास - यसको राम्रो प्रभाव विकिरण गर्न सक्छ, र त्यसैले 'र बुबाको हृदय आफ्ना छोराहरूमा फर्काइयो' छोराहरूको हृदय पनि आफ्ना बुबाहरूमा फर्काउन सक्छ।
यहाँ बट-गलिम शार (गिल-एड XNUMX को आमा) द्वारा 'स्वतन्त्र प्रेम' को अवधारणाको लागि प्रस्तावित नवीकरण व्याख्या ध्यान दिन लायक छ। उनका अनुसार ‘स्वतन्त्र प्रेम’ भनेको उनीहरुको अनुग्रहको प्रेम हो । अरूमा सकारात्मक बिन्दु खोज्दै - फिक्का प्रेम जगाउन र सम्बन्धमा जीवन सास फेर्न सक्छ।
र पक्कै पनि चीजहरू ब्रेस्लाभका रब्बी नाचम्यानको टोरा राफेभमा 'एल्की हुँदा गाउँदै' भन्ने शब्दहरूसँग सम्बन्धित छन्, जब 'अलि बढी' मा रमाइलो गर्दै, राम्रोको सानो स्पार्कमा, वा अझ सही रूपमा: थोरै त्यो। मानिसमा रहन्छ - र 'अलिकति उज्यालो - धेरै अन्धकारलाई हटाउँछ'।
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 17:XNUMX बजे
रब्बीले मलाई भावनात्मक प्रेम र अभिलाषामा के भिन्नता छ भनेर प्रष्ट पार्नेछ, म यो महसुस गर्न सक्दिन।
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 42:XNUMX बजे
मैले प्रश्न बुझिन । यी दुई भावनाहरू बीचको भिन्नता मेरो शब्दहरूसँग सम्बन्धित छैन। सबैजना सहमत छन् कि यो समान छैन। यी दुई फरक भावनाहरू हुन्। वासना भनेको मेरो हुन, केहि लिने चाहना हो। प्रेम एउटा भावना हो जसको केन्द्र अर्को हो र म होइन (केन्द्रापसारक र केन्द्रापसारक होइन)। मैले यहाँ भावना र धारणा (भावनात्मक र बौद्धिक प्रेम) बीचको भिन्नता छुट्याएको छु।
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 37:XNUMX बजे
"तर यदि प्रेम मानसिक निर्णयको नतिजा हो र भावना मात्र होइन, तब त्यहाँ आदेश गर्ने ठाउँ छ।"
तर पनि, मलाई कसरी केहि बुझ्न निर्देशन दिइन्छ ??? तिमीले मलाई बुझाए पनि मैले नबुझे वा असहमत भएमा त्यो मेरो दोष होइन!
यो 10 औं शताब्दीमा बाँचेको व्यक्तिलाई हेलियोसेन्ट्रिक मोडेल बुझ्नको लागि टोली बनाउनु जस्तै हो, यदि उसले स्वास्थ्य बुझ्यो तर के गर्ने!
भगवानलाई बुझ्नुको अर्थ कम्तिमा बुझ्ने कोसिस गर्नु र नबुझेको डरलाग्दा बलात्कार हुन्छ भनी नभनेसम्म
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 43:XNUMX बजे
तपाईले नबुझेसम्म कर्मचारीले यस विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ। धारणा यो हो कि जब तपाइँ चीज बुझ्नुहुन्छ तपाइँ यसलाई माया गर्नुहुन्छ। सफल भएनौ भने बलात्कार हुन्छ ।
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 43:XNUMX बजे
र अर्को प्रश्न: यदि तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै राख्नुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ भने यो बौद्धिक प्रेम हो, यहाँ बुझ्न के छ?
इजरायलबाट तपाईंको भाइ हुनुको अर्थ बुझ्नुपर्छ। एक व्यक्ति एक प्रकारको परिवार हो भन्ने बुझ्नुहोस् (परिवारमा यो प्राकृतिक हो)।
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 51:XNUMX बजे
के त्यसको हड्डीको बयान गर्नु अघि वस्तुको कार्य भन्नु हो? उदाहरणका लागि, टेबललाई "कुनै चीज जसले यसमा राख्न अनुमति दिन्छ" भन्नु यसको विशेषता हो वा यो यसको हड्डी हो?
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 44:XNUMX बजे
मलाई लाग्छ कि यो एक विशेषता हो। सायद यो पनि सामान्य मा डेस्क को विचार को भाग हो। तर मेरो अगाडिको विशिष्ट तालिकाको सम्बन्धमा यो यसको विशेषता हो।